China Sintered akanzwa mafirita Kugadzira uye Fekitori | Zhengyuan
1.best simba, yakakwira mehendi simba uye yakakwirira yekupwanya simba, zviri nyore kugadziriswa, kutambisa uye kusangana.
2.Stable yemhepo permeability & kuyerera chiyero
3.Working tembiricha: inogona kushandiswa -200 ℃ ~ 600 ℃ nzvimbo yekupisa uye acid uye alkaline nharaunda yekusefa.
4.Easy kudzorera kushambidza, hupenyu hurefu hwekushanda (inogona kushandiswa kupesana nemvura, fefita, yakadirwa mvura, yakanyungudutswa, kubheka uye nzira yekuchenesa).
Sintered yakarukwa waya mesh inogona kushandiswa akati wandei (yakanaka kana yakadzika sub micron) kusefa maficha, semuenzaniso iyo petrochemical nemakemikari indasitiri, pharmacy, uye mvura mamiriro.
Sintered yakarukwa waya mesh ine akawanda-matata akadzika ewakarukwa waya mesh yakamisikidzwa pamwe nekushandisa 'kutadza'. Izvi zvinogadzira chikamu chakakurisa chezvinhu zvitsva zvine hwakawanda kwazvo hwakasiyana michina yezvimiro. Nekubatanidza akawanda materu eaya akasiyana mesh kuruka, zvinokwanisika kugadzira zvinhu zvine chakananga chinangwa ukobvu, kubvumira, kukura kweporeti, uye meakisi masimba.
Mamwe marata anoshandiswa kuseenzesa kwakanyanya kusefa, mamwe kuchengetedza nekusimbisa.
Zvidhiza zvedu zvinoshandiswa zvinoedzwa zvinoenderana ne ISO 2943
Kuenderana ne hydraulic fluids ISO 3968
Flow hunhu ISO / Dis 3724
Inoyerera hunhu hunhu ISO / Dis 4572
Filter performance test (Yema-pass test) ISO 2942
Uchapupu hwekuvimbika uye hwemhando (Bubble point test) ISO 3723
Kuratidzwa kweyekupedzisira cap kusagadzikana ISO 2941
Kupunzika / kuputika kwerudzi rwekutsikiswa
Yepfuura: Tumira ballast mvura yekuseta cartridge
Inotevera: Sintered mesh filter